Gaari ay saarnaayeen dad Shacab ah oo lagu rasaaseeyay Shabeelaha Hoose. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAGaari ay saarnaayeen dad Shacab ah oo lagu rasaaseeyay Shabeelaha Hoose.
Gaari ay saarnaayeen dad Shacab ah oo lagu rasaaseeyay Shabeelaha Hoose.
November 21, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Gaari ay saarnaayeen dad Shacab ah oo lagu rasaaseeyay Shabeelaha Hoose.
Wararka ka imaanaya deegaanka Jilib Marka ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in rasaas lagu furay gaari ay saarnayen dad shacab ah oo wadada marayay.
Dadkii saarnaa gaariga ayaa waxaa lagu soo waramayaa in qaarkood ay ku dhaawacmeen, iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in ay jirto dhimasho, balse wararka ayaa ah kuwo aan faah faahino badan laga helin, sababo la xiriirta dadka oo aan Taleefan lagu heli Karin.
Ilaa iyo hada lama oga cida rasaasta ku furtay dadka shacabka ah ee marayay deegaanka Jilib Marka ee Gobalka Shabeelaha hoose.
Shalay ayaa deegaanka Jilib marka waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Daacish oo la ogaaday in dagaalamayaal shisheeye ay ku soo daabulayso Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay Duqeyn ka dhacday Gobalka Mudug.
717,067 total views, 2,365 views today
717,067 total views, 2,365 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
716,943 total views, 2,366 views today
716,943 total views, 2,366 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
716,972 total views, 2,365 views today
716,972 total views, 2,365 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
717,036 total views, 2,365 views today
717,036 total views, 2,365 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
717,091 total views, 2,366 views today
717,091 total views, 2,366 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]